Invisible iyo Peelable Silk Fibroin Film - Shiinaha Simatech
Alaabta Tani waa cad yahay, xal viscous oo si fudud loo lahu karaa on dusha, si deg deg ah wada qallajin iyo leexdo xagga lakabka ah laastikada, muddo dheer oo hufan. No daaweyn dheeraad ah loo baahan yahay. Marka la sameeyo maqaarka, waxaa laga yaabaa in shaqaynayaan sida maaskaro ah aan la arki karin, laakiin peelable ilaaliya maqaarka ka UV soo bandhigaan, sii qoyaan, samatabbixiyo ku raran yihiin qayb firfircoon iyo in la yareeyo qabsatay ay sabab u tahay sifooyinka farsamo maqaarka-sida.
The fibroin Xariir dabiiciga ah iyo ugu wakiilada kale ee loo isticmaalo in alaabta ka mid yihiin kuwa loo adeegsaday waxyaabaha caafimaadka, sidaas biocompatible, ammaan iyo soo saaray iyo tayada ay gacanta ku sida ay heerarka FDA iyo CFDA of excipients dawooyinka. sheyga waxaa loo isticmaali karaa sida wax saldhig u ah sii dejinta badeecooyinka kala duwan ee goobaha la isku qurxiyo sida iyaSameeo, bixinta daroogada la mariyo iyo ring, oo kafantii ku bogsashada, iwm
P arameter iyo hantida
Qaybaha Major: miisaanka kelli protein fibroin Xariir waaweyn
Imaanshaha: white, Doolaal, xal semi-Kolloidol
Nafwaayay: 1500-4000 Pa.s
(1) wax soo saarka waxay ka kooban tahay fibroin Xariir (qayb weyn ee) iyo excipients kale la isku qurxiyo (qaybaha yar), kaas oo si degdeg ah u sameeyaan karaa filimka aan muuqan iyo peelable on maqaarka hawada-qalajiyo iyo Daaweynta. Sababtoo ah halka ay ka kooban si dabiici ah soo jeeda, biocompatibility iyo xoog farsamoyaqaanka in sameeyay maqaarka bani'aadamka, filimka sameeyay sii joogi kartaa lifaaqa u dhow maqaarka muddo dheer oo aan wax cun-cun iyo dareen shisheeye-jirka. Waxaad si fudud dhil kartaa ama u maydho off maqaarka oo aan dhib iyo xanuun.
(2) fibroin miisaanka Xariir kelli weyn waa wax baaba'aysa cusub oo uu soo cadeeyay inuu yahay non-immunogenic oo aan sun by cilmiga xoolaha iyo in dhawaan la qoran mid ka mid ah maadooyinka waaweyn ee 2017 Research National Key iyo Horumarinta barnaamijka Shiinaha si wadajir ah ula qalabka collagen. processing The wax of fibroin Xariir waa ku cagaar, iyada oo la isticmaalayo kiimikada sunta ah iyo qalab gaar ah. Halabuurka The 18 acids dabiiciga ah amino ee fibroin Xariir sidoo kale faa'iido u encapsulation functional iyo xasilinta ee u taagoo bioactive.
(3) xogta Our muujisay in alaabta uu u nuugo karaa iftiin UV, sidaas bixinta shaqada qoraxda marka la codsadaa on maqaarka.
(4) wax soo saarka ayaa sidoo kale muujinayaa breathability fiican iyo ka hortagga biyo khasaaro, sidaas saamayn huurka iyo dareen raaxo leh marka laga codsadaa on maqaarka.
Maqaarka Second laastikada maqaarka Labaad
Invisible Oo Peelable Silk Fibroin Film
cusboonaadeen Silk Fibroin Film
Cusboonaadeen Silk Fibroin Film Protein
Cusboonaadeen Protein Film Silk
Silk Fibroin Film Protein
Silk Film Protein